धनमान श्रेष्ठको ‘सम्बन्ध विच्छेद’ « LiveMandu
धनमान श्रेष्ठको ‘सम्बन्ध विच्छेद’
१४ कार्तिक २०७६, बिहीबार २२:२३
किताबी बजार र धनमान
कुनै वेला अर्थात् हिजो अस्तिजस्तो लाग्छ विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषासाहित्य पठनपाठन गराउने क्रममा पुस्तकै हुदैनथ्यो । त्यस्तो अभावपूर्ति खातिर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकाव्य लेख्न अनुरोध गरिएको थियो । नेपाली भाषासाहित्यको भण्डार भर्नका लागि लेखकलाई अनुरोध गरिएर साहित्य लेखाइने समय बितेको एक शताब्दी पनि पुगेको छैन । तर अहिले नेपाली साहित्यको भण्डारमा ठेलमठेल पुस्तक पुगिसकेको अवस्था छ । हिजो पाठकले पुस्तक खोजिखोजि पढ्ने समय थियो । अहिले त लेखकले ‘मेरा कृति पढिदिनोस् न हजुर’ भनेर पाठकसँग अनुरोध गर्नु पर्ने समय आइसकेको छ । अथवा ठूलो हल्लाखल्ला गरेर मुखमा मात्र चामल हालिएका र भित्र भूसमात्र भरिएका चामलको बोरा झैँ भएका किताब बिक्रीका लागि प्रकाशकले बजारमा पाठकका लागि ‘झुक्याई खेती’ पनि गर्न थालिएको यस युगमा हामी आइपुगेका छौँ । लेखिरहने र स्वप्रचार पनि गर्न संकोच मान्ने धनमान श्रेष्ठ प्रवृत्ति लेखकहरू चाहिँ ओझलमा पर्ने यो युग हो ।
धनमान श्रेष्ठको पृष्ठभूमि
म बाल्यावस्थामै हुँदा गतिला कथाहरूले नेपाली भाषासाहित्य सिँगारिसकेका धनमान श्रेष्ठको नाउँ मैले सुनेकी थिइन भन्नु पर्दा र आफू पनि यसै क्षेत्रको हुनु पर्दा मलाई हुनसम्मको लज्जाबोध भएको छ ।
लेखकः इन्दिरा प्रसाई
यसै वर्ष ‘लघुकथा समाज’ मार्फत मैले `धनमान पुरस्कार´ ग्रहण गरेँ । धनमान श्रेष्ठद्वारा स्थापित उक्त पुरस्कार मैले प्राप्त नगरेकी भए शायद म धनमान विषयक थप अन्धकारमै रहन्थेँ हुँला । त्यसै समयमा स्वयम् धनमान श्रेष्ठबाट मैले उनका दुई वटा कथासङ्ग्रह ‘यौटा उस्तै कथा’ र ‘सम्बन्ध विच्छेद’ प्राप्त गरेकी थिएँ । उनका दुई थान पुस्तक हातमा परेपछि ‘स्रष्टाका नाउँको सम्मान पो पाएकी रहेँछु’ भनेर मलाई तत्क्षण गर्ववोध भएको थियो ।
‘कुनै लामो निद्राबाट ब्यूँझे झैँ, आफ्नो दीर्घकालीन मौनता भंग गरेर … फेरि नवयौवनको उत्साह उमङ्ग सहित लेखन र प्रकाशनमा जुट्नु भएको छ ।’ नेपाली भाषासाहित्यका वरिष्ठतम समालोचक एवम् दार्शनिक प्रातः स्मरणीय गोविन्द भट्टद्वारा धनमान श्रेष्ठकृत ‘यौटा उस्तै कथा’ को भूमिकामा लेखिएको उल्लेखित कुराले मेरो अन्तरमनलाई छोयो र घच्घच्यायो पनि !
उनीद्वारा साहित्यकार बनिहालौँ न त भनेर किताप छापेर कागजको नास र पाठकको समय सर्वनास गरिएको पनि छैन । उनका कथामा उनले भोगेको परिवार र समाजका कथा छन् । उनका कथामा नेपाली माटोले भोग्नु परेका राजनैतिक विषमभोगका कथा छन् । पाठकले उनका कथा पढ्दा आफ्नो र आफ्नो देशको अनुहार त्यहाँ सर्लक्कै देख्न सक्छ । त्यसैले पनि धनमान सम्मान योग्य कथाकार हुन् ।
२०२० सालदेखि नै कथा लेखनमा लागेका धनमान श्रेष्ठ आफ्नो अद्यव्यवसायमा अल्झेर साहित्य संसारबाट अलप भएका रहेछन् । साहित्य लेखेरमात्र पेट पाल्न सक्ने अवस्था हामी कहाँ बनिसकेको छैन । गतिला लेखकलाई सरकारले नै विद्वतवृत्तिको व्यवस्था गरेर राष्ट्रका लागि साहित्यको संरक्षण गरिनु पर्ने हो । तर हाम्रो देश सधैँ राजनैतिक संक्रमणको अवस्थामा भएको र सरकारी हिसाबले साहित्यलाई अनौपचारिक तरिकाले दलको भातृसंस्थामा गाभिदिनाले वास्तविक र स्वाभिमानी साहित्यकारहरू पलायन वा गुमनाम हुन वाध्य छन् ।
अर्को कुरा हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र पनि कहिल्यै किशोर भएन अझ गणतन्त्र त झन् वामे पनि सर्न सकेन । त्यसैले कठै गणतन्त्र आमाको काखमा लडिबुडी गर्दै अझै दूधै चुसिरहेको नै छ । अब त आहार विनाकी आमाका स्तनबाट रगतमात्रै आउन थालेको छ । तर सधैँको बालख गणतन्त्रले भने जिर्णशिर्ण आमाका लाम्टा चुसेको चुसेकै छ र आमालाई मरणान्त पारिसकेको छ ।
मुलुकको यस्तो कारूणिक अवस्था हुँदा धनमान श्रेष्ठहरूले पेटपाल्नका लागि जागिर खाएर ४० जिल्ला धाउन कि घाम नआउने छिँडीको कोठामा पटुका कसेर साहित्य लेखुन् ? यो कथा त धनमान हराएको जानकारी हो । यहाँ कैयन धनमानहरू यसरी नै हराएका छन् । वर्तमान नेपाली साहित्यबारेको यो एउटा सङ्क्षिप्त सूचना मात्र पनि हो ।
धनमान श्रेष्ठ भेट्टिए
अब म धनमान श्रेष्ठ फेला परेको कुरा गर्छु । हो अब धनमान श्रेष्ठ सग्लै भेटिए । उनी साहित्यको चौतरीमा भेटिए । अबको विशेष कुरा यही नै हो । यस सन्दर्भमा गोविन्द भट्टले भनेका कुराबाट यस लेखको प्रारम्भ गर्नुको औचित्य पनि हराएका धनमान भेटिँदा मैले पनि गरेको हर्षबढाईँ नै हो ।
प्रारम्भिक अवस्था अर्थात् कुर्कुरे वैँस लागेपछि र गृहस्थीको बोझले नथिचुञ्जेलसम्म प्रत्येक मानिस कवि हुन्छ । अक्षर जान्ने र लेख्ने सीप हुनेले उक्त कविता कागजमा लेखेर व्यक्त गर्छ । अक्षर नजान्ने अथवा लेख्ने सीप नहुनेले र स्वरले साथ नदिएकाले मनमनै गीत गुन्गुनाउलान् अनि स्वर पनि हुनेले आफैँ गीत कथेर गुन्गुनाउलान् । प्रत्यक्ष संलग्न हुन नसक्नेले अर्कैको रचनामा आफू साधारणीकृत भएर साहित्य पढेर वा गीतसङ्गीत सुनेर आफ्नो मनमा उठेका तरङ्गहरूको व्यवस्थापन गर्ला । अनि लेख्ने क्षमता भएकाले चाहिँ अविरल लेखिरहन सके कालान्तरमा भए पनि साहित्यकारको दर्जा पाउला । गीत पनि अविरल गाए ऊ गायकको तहमा पुग्ला । लेख्न गाउन नसके ऊ पाठक वा स्रोता नै भए पनि बन्ला । यस प्रकृयामा त्यसरी प्रारम्भिक अवस्थामा लेख्ने मानिस लेखी नै रहन्छ भन्ने छैन । गृहस्थ आश्रममा हेलिँदा हेलिँदै र जीविकोपार्जनमा जेलिँदा जेलिँदै अधिकांश प्रारम्भिक साहित्यकारहरू साहित्यबाट अस्ताउने गर्छन् । विरलैमात्र अस्ताएपछि पनि झुल्किने गर्छन् । धनमान श्रेष्ठ ती विरालाकोटीका साहित्यकार भएका छन् । मेरो विचारमा यस प्रवृत्तिका साहित्यकार असली साहित्यकार हुन् । किनभने समयको चटारोले चौपट पार्दा र जिम्मेवारीको बोझले थिचिमिचि र किचिमिचि पार्दा पनि धनमानको साहित्यिक प्रतिभा मर्न सकेन । त्यो त अजम्बरी भएर समय पाउनासाथ जाग्यो । उनको साहित्य जुरूक्क उठ्यो र कर्मभूमिमा फेरि दौडन थाल्यो । यही कुरा नेपाली भाषा साहित्यका लागि विशेष प्राप्ति बन्यो र प्रेरक गाथा पनि बन्यो ।
अधिकांश जागिरेहरू जागिरबाट अवकाश पाएपछि टाउको निहुराएर ‘अवकाश पाएँ’ भनेर निन्याउरो अनुहार लाउँछन् । उक्त निन्याउरोपन उनीहरूको अनुहारसम्ममात्र रहँदैन । त्यसले क्रमशःक्रमशः उनीहरूका मस्तिष्कका स्नायुहरूलाई निन्याउरो पार्न थाल्छ र व्यक्ति डिप्रेशन, अल्जाइमर वा विविध रोगहरूका चपेटामा पनि पर्न थाल्छ । तर धनमानप्रवृत्ति व्यक्तिले चाहिँ कहिल्यै अवकाश लिँदैनन् ।
नेपाली भाषासाहित्यले धनमान श्रेष्ठमा गर्व गर्नु पर्ने अर्को कुरा पनि छ । त्यो हो उनको मातृभाषा नेपाली नहुनु । भक्तपुरका नेवार समूदायमा जन्मेर पनि उनमा भएको नेपाली साहित्यप्रतिको प्रेम अति स्तुत्य छ ।
धनमान श्रेष्ठका कथा
धनमान श्रेष्ठको लेखनबारेको कुरा पनि विशेष नै छ । त्यो के हो भने धनमानले लेखेका तीन ओटा कथासङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित कथाहरू लेख्नका लागि मात्र लेखिएका छैनन् । उनीद्वारा साहित्यकार बनिहालौँ न त भनेर किताप छापेर कागजको नास र पाठकको समय सर्वनास गरिएको पनि छैन । उनका कथामा उनले भोगेको परिवार र समाजका कथा छन् । उनका कथामा नेपाली माटोले भोग्नु परेका राजनैतिक विषमभोगका कथा छन् । पाठकले उनका कथा पढ्दा आफ्नो र आफ्नो देशको अनुहार त्यहाँ सर्लक्कै देख्न सक्छ । त्यसैले पनि धनमान सम्मान योग्य कथाकार हुन् ।
धनमानले उनको मातृभाषामा के कति योगदान पुर्याएका छन् सोबारे म अनविज्ञ छु । तर धनमानले मेरो मातृभाषामा पुर्याएको योगदानका कारण म उनीप्रति श्रद्धावान भएकी छु ।
धनमानका `स्वास्थ्य कथा`
कथाकार धनमान श्रेष्ठले कथाहरूमध्ये स्वास्थ्य सम्बन्धी र अझ क्यान्सर सम्बन्धी कथा लेखेका छन् । क्यान्सरजस्तो जटिल र असाध्य रोगबाट पनि बच्न सकिने कुरा जनसाधारणले बुझ्ने गरी र यति रोचक पाराले पनि लेख्न सकिँदोरहेछ भन्नका लागि पनि यी कथाहरू उदाहरण भएका छन् । यी कथाहरू लाई कथाको अर्को एउटा `स्वास्थ्य कथा´ को बेग्लै फाँट खोलेर छुट्टै सङ्ग्रहका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दा यी कथाहरूको मूल्य थप चुलिन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो । हाम्रोजस्तो शून्य स्वास्थ्यचेतना भएको समग्र समाजमा `स्वास्थ्य कथा´ को ठूलो खाँचो छ भन्ने मलाई लाग्दछ । जनधनको लुट नगरेर जनधनको सुरक्षा गर्ने किसिमको यदि हाम्रो सरकार हुँदो हो त धनमानका `स्वास्थ्य कथा´ सरकारले नै प्रकाशन गरेर प्रत्येक गाउँ गाउँका स्वास्थ्य चौकीबाट घरघरमा प्रचारप्रसार गर्न सके जनताको स्वास्थ्य र कथाकार धनमानको लेखन उद्धेश्य पनि पुरा हुने थियो भन्ने लोभ पनि मलाई लागेको छ ।
धनमानको `सम्बन्ध विच्छेद´
८३ वर्षीय धनमान श्रेष्ठ आफ्नो नवीनतम कृति `सम्बन्ध विच्छेद` लिएर आएका छन् । यस सङ्ग्रहका कथाका माध्यमले पनि कथाकार धनमान श्रेष्ठ राजनैतिक व्यङ्ग्यको प्रस्तुति, जनस्वास्थ्य चेतना जागरणको प्रयत्न र समाजिक विकृतिप्रतिको क्रान्तिका लागि प्रतिबद्ध छन् । वयप्रौढ स्रष्टाका यी कथाहरू नवयौवनले झकिझकाउ छन् ।
धनमान : प्रज्ञावान
अधिकांश जागिरेहरू जागिरबाट अवकाश पाएपछि टाउको निहुराएर ‘अवकाश पाएँ’ भनेर निन्याउरो अनुहार लाउँछन् । उक्त निन्याउरोपन उनीहरूको अनुहारसम्ममात्र रहँदैन । त्यसले क्रमशःक्रमशः उनीहरूका मस्तिष्कका स्नायुहरूलाई निन्याउरो पार्न थाल्छ र व्यक्ति डिप्रेशन, अल्जाइमर वा विविध रोगहरूका चपेटामा पनि पर्न थाल्छ । तर धनमानप्रवृत्ति व्यक्तिले चाहिँ कहिल्यै अवकाश लिँदैनन् । सरकारले दिएको अवकाशपत्रलाई सेफभित्र राखेर भोटे ताल्चा ठोकेपछि धनमानहरू आफ्नो वक्यौता लक्ष्यका लागि कर्मशील हुन्छन् ।
शान्त रहेर आफ्नो विशाल काम गरिरहनु, गहिरो चेतना राखेर अक्षरहरूद्वारा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु र अविश्रान्त साधकका रूपमा आफ्नो कर्मभूमिमा एकनास जुट्नसक्नु जस्ता विशेषताहरूले चुलिएका धनमान श्रेष्ठ वयले मात्र जेष्ठ होइन प्राज्ञतत्वले समेत जेष्ठ भएकाले म उनीप्रति हार्दिक नमन गर्दछु । साथै धनमान श्रेष्ठले शताब्दी टेक्न अझै १७ वर्ष बाँकी रहेकाले उनीबाट थप अब्बल कथाहरूको सृजना भएर नेपाली कथा साहित्य घनिभूत हुने विश्वास समेत मैले सँगालेकी छु ।
#यौटा उस्तै कथा